Coronavirus oo sababay in dunida ay ku faafto dawo been abuur ah - Tilmaan Media
Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ka digtay tirada dawooyinka been abuurka ahi ee lala xiriirinayo cudurka Covid-19 ee dunida ku sii baahayo.
Baaritaan ay BBC-du sameysay ayaa muujinaya in dawooyin badan oo been abuur ah lagu iibiyo waddamada qaaradda Afrika, iyadoo arrintaa looga faa’iideysanayo baahida ka jirta suuqyada caalamka, gaar ahaanna xilligan oo cudurka Coronavirus uu dinda aafeeyay.
WHO ayaa sheegtay in isticmaalka dawooyinkani ay ka dhalan karto “xaalad caafimaad oo halis ah.”
Dalalka saboolka ah ee Afrika lacag badan bay ku iibsadaan dawooyin liita
Shaqada qeybta daryeelka degdegga ah ee Boris Johnson la seexiyay?
Mid ka mid ah khubarada caafimaadka ayaa sheegaya in dayoowinkani been abuurka ahi ay keeni karaan xaalad caafimaad-darro oo barbar socota halista cudurkani Coronavirus.
Shirkad ku taal dalka Pakistan ayaa sheegtay in waxyaabaha laga sameeyo dawooyinka duumada lagula tacaalo ay xilliyadii hore kiilihii ku iibsan jirtay 100 doolar balse haatan uu yahay 1,150 oo doolar.
Maadaama waddamo badan xayiraado dhanka dhaqdhaqaaqa ahi lagu soo rogay, ma ahan oo kaliya in uu yaraanayo wax soo saarkii shirkadaha dawooyinka balse waxaa cirka isku sii shareeraya baahida loo qabo dawooyinkani, xilli dadyowga caalamku ay guryaha dhiganayaan keyd dawo, cabsi ay ka qabaan cudurka Coronavirus awgeed.
Arrintan ayaa keentay in ay soo bataan dawooyinka been abuurka ahi oo haatan ay ka digeyso hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO.
Waxaa haatan gabaabsi sii noqonaya dawooyinka malaariyada lagu daweeyo. Tan iyo markii madaxweyne Trump uu sheegay in dawooyinka chloroquine iyo hydroxychloroquine oo inta badan lagula tacaali jiray cudurka duumada ay suurtagal tahay in lagu daweeyo cudurka Coronavirus, waxaa aad u sii kordhay baahida loo qabo dawooyinkaasi.
Balse hay’adda WHO ayaa sheegtay in aysan jirin caddeymo muujinaya in dawooyinkaasi lagula tacaali karayo cudurkani.
Wixii xilligaasi ka dambeeyay, waxa ay BBC-du ogaatay in dawada chloroquine oo been abuur ah aad loogu iibinayay gudaha waddamada Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ee Congo iyo Cameroon. WHO waxay sidoo kale dawadaasi been abuurka ahi ku aragtay gudaha waddanka Niger oo aad loo iibsanayay.
Sida caadiga ahi, kunkii xabbo oo kaniinka dawada chloroquine ah ayaa waxaa lagu iibin jiray 40 doolar, balse gudaha waddanka Congo waxay haatan dawadaasi ka joogtaa 250 doolar.